Muvhuro, 17 Kukadzi 2020
"Denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu haangatongopfuuri" (Mateo 24 ndima 35).
Kune vamwe vanoshandira Ishe. Vanosiya mabasa avo. Vanoshanda nesimba ravo. Vanoshandisa mari yavo. Asi vanofunga kuti havana chavari kuwana. Havasi kuvona hupenyu hwavo huchivandudzika. Saka vanobva vavora moyo. Iwe haufaniri kudero. Usarega pfungwa dzakadero dzichipinda mumoyo mako. Ungava uri kushandira Vhangeri. Mabasa ako aya ane mubairo. Iwe ungasakasira kuvona mubairo uyu. Asi vamwe vanenge vari kubatsirwa nemabasa aya.
Izvi ndizvo zvakaitika kuvaprofita vekare. Vakaprofita. Asi vazhinji vavo havana kuvona zviprofita izvi zvichiitika. Zviprofita izvi zvava kuitika munguva yedu. Tisu tava kubatsirwa nazvo. Vaprofita ava vakasvika pakufa. Zviprofita zvavo zvakanga zvisati zvaitika. Saka vanogona kunge vakatovonekwa sevarevi venhema. Asi zvinhu zvavaitaura zvakanga zvisiri zvenguva yavo. Zvakanga zviri zvenguva yedu.
Mumwe wevaprofita ava ndiJoere. Tinoverenga mashoko ake muna Mabasa 2 ndima 17. Akati, "Mwari anoti: Namazuva okupedzisira, Ndichadurura Mweya wangu pamusoro penyama yose; Vanakomana venyu navanasikana venyu vachaporofita ...". Vanhu venguva yake vakanga vasingazivi mazuva ekupedzisira aya. Saka vanogona kunge vakafunga kuti ichi chaiva chiprofita chenhema. Asi mazuva ekupedzisira akazouya. Chiprofita ichi chakazoitika. Izvi ndizvo zvatinovona muBhaibheri. Tinozviverenga muna Mabasa 2 ndima 1 kusvika 4. Vaapostora vakanga vari muimba. Vakanga vagere pamwe chete. Ruzha rwakabva rwanzwikwa kubva kudenga. Rwaiita serwemhepo inovhuvhuta. Rwakazadza imba iyi yose. Marimi emoto akamhara pamusoro pemumwe nemumwe wavo. Vose vakabva vazadzwa naMweya Mutsvene. Mwari ngavapiwe mbiri yose!
Chiprofita ichi chakanga chava nemakore chataurwa. Zvino, Mweya Mutsvene vakabva varangaridza Petro. Tinoverenga mashoko ake muna Mabasa 2 ndima 16. Akati, "Kwete, izvi ndizvo zvakataurwa nomuprofita Joere". Hareruya! Ungava uri kushandira Ishe. Ungava uri kushandira Vhangeri. Zvingaita sekuti Shoko raMwari harisi kuitika muhupenyu hwako. Asi usafunga kuti hapana chiri kubuda pakushingaira kwako. Saka usavodzwa moyo. Usarega kushandira Ishe. Usarega kushandira Vhangeri. Panenge paine chiri kutoitika. Vanhu vangataura havo. Zvingaita sekuti hapana chauri kuwana. Izvozvo hazvina basa. Ramba uri pabasa iri. Wedzera kurishingairira. Ramba uchishumira Mwari. Meso ako ngaarambe ari pavari. Shoko ravo ndere chokwadi. Zvavanotaura zvinoitika. Hazviregeri.
Shoko renyu ndiro rinotonga kudenga. Richagara richitonga. Imi ndimi Mwari. Makagara muripo. Mucharamba muripo. Denga nenyika zvingaparara. Asi Shoko renyu harikoni kuitika. Zvino, mune zvamakataura pamusoro pangu. Zvinhu izvi ndezvechokwadi. Zvinoshamisa. Ndinozvigamuchira. Ndinozvishandisa pakurarama kwangu. Ndine maropafadzo. Maropafadzo aya ari muna Kristu. Ndinoshandisa maropafadzo aya. Muzita raJesu. Ameni.